नदेखेको काला पहाड - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका १७ चैत्र २०७६, 5:54 am
दियालोको धिपधिपे मधुरो प्रकाश कतिखेर पारि लेकाली पहाडबाट आएको तीब्र बेगको आँधीले निभाइदिन्छ । मनमाया दाउरा जोरजाम गरेर आगो फूफू गर्दै सल्काउने प्रयास गर्छे । रामलाल पनि बिहान मिर्मिरेमै साहुको काममा गएको फर्कने बेला भइसक्यो तर घर पुगेको छैन । मनमाया चुलो बालेर मात्र के गरोस् ? पकाउनका लागि घरमा कुनै सरजाम छैन । भान्साभन्दा अझै भित्र भण्डारमा जान्छे । उहीँ धुइसोले कालो भएको थैलोमा हेर्छे । थोरै मकैको पिठो छ । लिएर आज पनि त्यही मकैको खोले पकाउन तरखर गर्छे ।
सन्ध्याकालीन सूर्यका मलिन रश्मीहरुले धर्तीबाट बिदा लिँदैछन् । बिस्तारै बिस्तारै कालीरातको पदार्पण हुँदैछ । तर त्यो कालीरात हिजोभन्दा आज झनझन भयानक बनेर आउँदैछ । आजभन्दा भोलि झनै अजङ्गको हुने संकेत छ । हिजोभन्दा आज र आज भन्दा भोलि झनै भयावह हुने संकेत गर्दै कालीरातले भूत, प्रेत, मसान भित्राएर आफ्नो निर्मम र कठोर चरित्र प्रदर्शन गर्दैछ ।
खस्दै गरेको दिनमा छिप्पिदै गरेको झिसमिसे साँझ । त्यही साँझ हो– पारि साहुडेराका सुबेदार बाजे र गैरी जिउलाका मुखिया बाका घरमा आएको । त्यही साँझ हो– गाउँका माडे र हवेलीका घरमा आएको । हो, त्यही अविभाज्य साँझ हो दरवार, मन्त्री निवास र ठूलठूला साहेव साहेवनीको निवासमा आएको पनि । त्यही साँझ त्यहाँ रात्रिभोज चल्दैछ । अबको केहीबेरमा आफन्त साथीभाइ जमघट भएर कक्टेल पार्टी गर्दैछन् । निस्फिक्री स्वागत गर्दैछन् त्यो साँझलाई ।
रामलालको घर सधैं जस्तो आज पनि निकै सुनसान छ । मनमाया सन्ध्यालाई छिचोल्न दाउराको जोरजाम गर्छे । बर्षातमा गोठ चुहिएर भिजेका चिसा दाउरा आगो नबलेर मनमायाको बेहाल छ । फू…फू…फू… गरेर आगो फुक्दा फुक्दा उसलाई रिङ्गटा छुट्ला जस्तो भइसक्यो ।
छोरो काले खोले खाएर साथीसँग खेल्न गएको झुत्रा कपडा झनै च्यातेर भर्खरै आयो । सधैँ खोले र पानी पिएर भोक मेटाउनुको वेदना कालेको चेहरामा प्रष्ट पढ्न सकिन्छ । एउटा नवयौवना ठिटोले केके सुनौला सपनाहरु बुन्दो हो मनमा । सुबेदारको नाति रामेलाई के को फिक्री ? प्रत्येक पेन्सनमा बाजेले एक जोडा कपडा ल्याइदिन्छन् । मुखियाका नातिहरुको कुरै नगरौं । आज ऊ निकै गम्भीर छ । एकटकले खै के के सोचिरहेको छ । त्यस्तै डेड दुई बर्षको फरक होला उसको आफ्नी बैनीसँग । उसकी आमा मनमायाको पेटमा फेरि अर्को शिशु हुर्किरहेको छ । आज पनि आफ्नी आमाले अगेनोमा खोले पकाएको देख्यो उसले । परिवारको जेठो सन्तान हुनुको जिम्मेवारी उसले आज गम्भीररुपमा बोध गरेको छ । उसकी बहिनी च्यात्तिएको कपडाले आफ्नो जिउ ढाकेर पुरानो मैलो प्लास्टिकको बाल्टिनमा पानी लिएर भर्खरै घर आएकी छे ।
श्यामेले एकपटक बहिनीतिर कारुणिक नजर डुलाउँछ । खुम्चेर घुँडामाथि आएको पुरानो सुरुवाल अनि भित्री बस्त्र देखिने गरी च्यातिएको मैलो कुर्ता लगाएकी बहिनी बिचरी नुहाउनका लागि साबुन नपाएर खलीले नुहाउँदा नुहाउँदा कपालै लटा परिसकेको छ । लाललाल परेका पोटिला गाला फुटेर रगत चुहिएला जस्तो । उसको चेहरा पनि निकै मलिन छ । उता झुत्रो वस्त्र लगाएर एउटा अबोध बालक कारुणिक रुवाई रोइरहेको छ । आर्तनादले भरिएको स्वरमा मनमाया छोरीलाई भन्छे, ‘ए नानी । जा ऊ… परबाट बालाई बोला । कतै आउँदैछन् कि ?’ रात सुरु भइसकेकाले किराकाँटीले छत्राकछुत्रुकले त्रसित हुँदै सीता डाँडामा पुगेर बालाई कराउँछे, ‘बाबा ओ बाबा…, बाबा…’ चारैतिर पहाड गुन्जायमान हुँदै आवाज प्रतिध्वनित हुन्छ । कतै निकै टाढा उसको बाबाले आउँदै गरेको जवाफी ध्वनि दिएको आभास हुन्छ । कतै निकै टाढा उसको बाबाले आउँदै गरेको सांकेतिक आवाज उसको कानमा ठोकिन्छन् । यो आवाज बाबाको आवाज भएको ठम्याउँदै ऊ घरभित्र पस्छे ।
रात बिस्तारै बिस्तारै अझ भयावह बन्दैछ । आमा पारि सल्लाघारीतिर कतै बाबा बोल्दैहुनुहुन्छ । ‘ए.. जा, पारि गएर बाबु खेला । किन रोइरहेको छ ?’ सीताले भाइलाई भुलाउन खोज्छे । भोकले रोइरहेको अबोध बालक आहारबिना किन मान्थ्यो ? झनै ठूलो ठूलो स्वरमा रोइरहेको छ ।
श्यामे आज निकै गम्भीर र स्तब्ध छ । आफ्नो परिवार गरिब हुनुको वास्तविक पीडाले उसको अन्तरहृदय निकै नराम्ररी घोंचेको छ । सधैं साथीहरुसँग खेलेर थकित मुद्रामा घर फर्केर आमा र बहिनीलाई हकारेर बोल्ने । भोक लाग्यो, खाना मिठो भएन भनेर त्यसैत्यसै फतफताउने श्यामे आज बिल्कुलै फरक देखिएको छ ।
भर्खरै यौवनको संघार कुल्चिएकी आफ्नी बहिनी च्यातिएका झुत्रा कपडा पहिरेकी छे । जसलाई आफ्ना बाको मजदुरीले एकसरो लुगा फेरिदिन सकेको छैन । उता अबोध बालक (भाइ) भोक सहनै नसकेर चिच्याइरहेको छ । दियालोको मधुरो प्रकाशमा चाउरिएको अनुहार लगाएर मकैको खोले घोट्दैछिन् आमा ।
बाहिर आँगनमा खुत्रुक्क खुत्रुक्कको आवाज आयो । परिवारले अनुमान लगायो, त्यो आवाज त्यो घरको मुली मालिक ती नवयुवक श्यामे, सीता र अबोध बालकको बाबा र मनमायाका श्रीमान हुन् । घरको मालिक साहुको कामबाट रात अबेर खाली हात घर फर्के पनि सकुशल घर पुग्दा परिवारका सबै सदस्यहरुको निन्याउरो अनुहारमा खुशियालीका मलिन रेसाहरु देखिन्छन् । लखतरान परेको शरीर, थाकेको जिउ, भित्र पस्नासाथ थचक्क धुलो भुइँमा बस्छ रामलाल । रोइरहेको सानो छोरोतर्फ हेर्दै भन्छ, ‘किन रोइरहेको छ बाबु ?’ मनमाया आर्तनादले भरिएको स्वरमा भन्छे, ‘भात खाने रे !’
रामलालको हृदय छोरालाई एक मुठी चामलको भातसम्म पनि खुवाउन नसक्नुको पीडाले छियाछिया हुन्छ । अन्तर्मनमा कुण्ठित गरिबीको तलाउ फुटेर खहरे बनी आँखाबाट बाहिर छताछुल्ल हुन्छ । हृदय फुटेको बाढी अबिरल बगिरहन्छ, अबिराम बगिरहन्छ । छाति भक्कानिएर जब्बर पत्थर हुन्छ । ऊ आफैलाई एउटा बाबु भएर नाबालक सन्तानको भोक समेत मेटाउन नसकेकोमा हीनताबोध हुन्छ । आफैलाई एउटा असक्षम र निर्दयी बाबु सन्झन्छ र कल्पना गर्छ, ‘म यस्तो हरिकंगाल जसले एक मुठी चामलको जाउलो सन्तानलाई दिन सक्दैन । उसैलाई किन धेरै सन्तान जन्माउनु पर्ने ?’
दिनभर साहुको कठोर बोलीले छियाछिया भएको मुटु साँझ खरको छानामुनि भएको झुप्रो घरको गरिबीको पीडाले निकै बल्झिन्छ । उसको मनमा खेलेको आर्तनाद मनमाया पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छे । अनि निर्दयी अदृश्य ईश्वरलाई सम्झिदै भन्छे, ‘हे ईश्वर ! यो छाप्रोमा वेदनामाथि झनै वेदना थपेर किन रमिता हेरिरहेको तिमी ?’
उता रामलालको मुटुको धड्कन रोकिएला जस्तो भयो । रगत प्रवाहको बेग नै बन्द होला जस्तो । एउटा बज्रप्रहारले हृदयमा हिर्कायो मानौं ब्याधाले हानेको गोलीले मृगको मुटु नै छिडायो । यिनै अतीत र वर्तमानका कठोर दिन सम्झेर रामलाल एकौछिन स्तब्ध भयो ।
उसकी छोरी पनि कहाँ अबोध छे र बाआमाको वास्तविक पीडालाइ उसले पनि महसुस गर्दछे । गला अवरुद्ध पार्दै उसले भन्छे, ‘बा अब म पनि मुखिया बाजेको घरमा काम गर्न जाने है !’ दिनभर काम गरेर म भाइलाई खुवाउने चामल लिएर आउँछु । काम गरेपछि मुखिया बाजेले चामल त दिन्छन् नि बा ?’ यत्तिकैमा परिवारमा झनै सन्नाटा छायो ।
तर ती अबला नारीको अस्तित्वहीन निर्बल हृदय जसमा कुनै आत्मबल छैन । प्रतिशोध छैन । प्रतिकार छैन । छ त केवल अन्तरमनमा कुण्ठित भावना र बाल ऊर्जा । ‘म कसरी परिवारमा रातारात गरिबी हटाएर सुखका दिन ल्याउन सक्छु ?’ रामलालको हृदयमा अविश्वासको तुवालो मडारिन थाल्यो ।
दिनभर गाउँमा साथीहरूसँग खेल्दा आफू गरिब भएर हेपिनुपरेको पीडाले श्यामेलाई बेस्सरी पिरोल्छ । परिवारको जेठो सन्तान भएकाले आफूलाई बाआमाको पिण्डपानीको दाता सम्झेर परिवारको गरिबीलाई छिचोल्न र आफ्नो परिवारलाई सुख दिन आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी आएको महसुस गर्दै बाबुको छेउँमै गएर भन्छ, ‘बा म अब अल्लारे पाराले कहिल्यै पनि बरालिन्न । तपाई चिन्ता नगर्नुहोस । अब म पनि ठूलो भइसकें । उसको मनभित्र विभिन्न अनुत्तरित प्रश्नहरु खेलिरहन्छन् ।
रामलाल छोराको कपाल सुम्सुम्याउँदै भन्छ, ‘के गर्छस् त बाबु ? म दिनरात साहुको काम गरेर पनि तिमीहरुलाई पाल्न पनि सकेन ।’
गला अवरुद्ध पार्दै श्यामेले भन्छ, ‘म पनि पैसा कमाउन जान्छु बा अब !’
रामलाल– ‘कहाँ जान्छस् ? अनि कसरी पैसा कमाउँछस त बाबै ?’
श्यामेले मुटु दरो पार्दै भन्छ, ‘कालापहाड ! हो बा… । म अब कालापहाड जान्छु अनि धेरै पैसा कमाएर साहुको ऋण तिर्छु अनि भाइबहिनीलाई लुगा पनि ल्याइदिन्छु ।’
परिवारमा एक प्रकारको सन्नाटा छाउँछ । एकैछिन सबै स्तब्ध हुन्छन् । त्यो एकैछिनको मौनता तोड्दै रामलालले भन्छ, ‘कसरी जान्छस् कालापहाड ?’
यस्तै वेदनापूर्ण त्यो कालो रातमा रामलालको घरमा भान्सा भएन । सबैलाई घरको पारिवारिक गरिवीको पीडाले भावुक बनायो । सुँक्कसुँक्कमै सबैको रात बित्यो ।
हिजो अस्तिको भन्दा फरक त्यो घरको आजको रात सबैको निर्बल हृदय अनि बेसहारा साहसभित्र कहीँकतै उल्लास र उत्सर्ग छैन ।
एकाबिहानै मिर्मिरेमै रामलाल साहुको काममा गयो । सँगसँगै मनमाया पनि घाँस काट्न जंगलतिर लागिन् । लगत्तै उठेको श्यामेले आफ्ना मैला र झुत्रा कपडा पोको पारेर बहिनी र भाइको गालामा म्वाई खायो अनि गहभरि आँसु बनाएर घर छोड्यो ।
ओंठ निचोर्दा दूध निस्केलान् जस्तो । शरीर जता छाम्यो उतै नङ्ग्रा गाडिएलान् जस्तो कोमल अपरिपक्व श्यामे गयो रे, नदेखेको कालापहाड !